Izute Belkin Thunderbolt 3 Express n'ọdụ ụgbọ mmiri HD | Esi m mac
Izute Belkin Thunderbolt 3 Express n'ọdụ ụgbọ mmiri HD
Taa, ịzụta MacBook Pro bụ nnukwu ihe ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ị nwaa anwa ịzụta ụdị dị ka nke nwere Touch Bar, dịka ọmụmaatụ, ị ga-ahụ na ohere ndị kọmputa nwere otu usoro ahụ bawanye ụba. O sina dị, ọtụtụ bụ ndị ọrụ ndị na-chọrọ nwere a desktọọpụ kọmputa n'ụlọ na n'echiche ahụ MacBook Pro dara na ọdụ ụgbọ mmiri na ụdị njikọ.
Dị ka ị maraworị, ọhụrụ MacBook Pros na na-enweghị Touch Bar na-abịa naanị ọdụ ụgbọ USB-C. Otu n'ime ụdị ahụ nwere ọdụ ụgbọ mmiri karịa nke ọzọ mana ha niile bụ ụdị USB-C ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ụdị njikọ ndị ọzọ ị ga-abanye na nkwụnye ọkụ.
Belkin amụwo isiokwu a ọtụtụ ma tinye n'ahịa ezigbo ihe ijuanya na nke ahụ bụ na ọdụ Thunderbolt 3 Express Dock HD anyị nwere ike ịnweta ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche site na ijikọ ya na ọdụ USB-C nke MacBook Pro Dịka ị maraworị, ha nwere teknụzụ Thunderbolt 3 karịa ọkọlọtọ USB-C.
Ekele maka ntụgharị nke Thunderbolt 3, na otu ọdụ ụgbọ USB-C nke MacBook ị ga-enwe ike maka Mac, mmepụta vidiyo na nnyefe data site na eriri Thunderbolt 3 bandwit nke ruru 40 Gb / s, nke a na-ekwu n'oge na-adịghị anya.
Mgbe ị jikọtara ọdụ a na MacBook gị, ọ ga-enye gị ohere iji nlezianya 5K ma ọ bụ ihe nlele abụọ nke 4K na ekele maka ọdụ ụgbọ mmiri abụọ abụọ Thunderbolt 3, ị nwere ike jikọọ Mac gị na Thunderbolt 3 na ihe ruru ise Thunderbolt ngwaọrụ na yinye. Tụkwasị na nke ahụ, ọdụ ahụ gụnyere ọdụ ụgbọ mmiri atọ USB 3 (5 Gb / s), Gigabit Ethernet, ntinye ụda na mmepụta, DisplayPort na ike DC site na nkwụnye ọkụ na-esonye. Ọ dakọtara na HDMI na usoro vidiyo ndị ọzọ site na ndị nkwụnye ha kwekọrọ na-ere iche.
Su ọnụahịa bụ euro 349,95 ma ị nwere ike ịmụtakwu ihe na Apple nwere weebụsaịtị. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ezigbo nhọrọ maka onye ọ bụla chọrọ ka MacBook ha bụrụ kọmpụta ha na desktọọpụ na ọ bụ na site n'akụkụ aka nri ị gaghị enwe ihe ọ bụla ị ga-ekwo na iMac, ma e wezụga na ihe ị hụrụ n'anya bụ kọmputa n'onwe ya na ọ bụ a niile na otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Izute Belkin Thunderbolt 3 Express n'ọdụ ụgbọ mmiri HD
Apple ka ịgbakwunye ihu ude technology ka Macs
Apple weputara beta nke ise nke tvOS 10.2.2 maka ndị mmepe